सेक्स गर्ने चार तरिका – Hamrosarokar
By Hamrosarokar	 On २४ असार २०७८, बिहीबार २०:५९
एजेन्सी–यसका वारेमा घरि घरी परिभाषा दिनु राम्रो नहोला । अव हुँदाहुँदै सेक्स यो हो भनेर जानकारी दिने हो भने त झन तनावै होला । यसको मतलव सेक्स भन्ने कुरावाट सवै परिचीत छन । मानिस मात्रै होईन जनावर, पशुपक्षिं देखी सवै जसो । अव कुरा गरौं सेक्समा कसरी भरपुर चरम सुख लिने ।
कतिबेला सेक्सको रफ्तार बढाउने इच्छा लागिरहेको छ यस्तै९यस्तै । यसले दुवैलाई असिम आनन्द प्राप्त हुन्छ ।
सेक्स गर्ने चार तरिका, कुन समय उपयुक्त ?
यौन सम्पर्कमा शीघ्र स्खलन कम गर्ने ८ तरिका
हप्तामा कतिपटक यौन सम्पर्क गर्नेः यस्तो छ सही तरिका
सेक्स कति पटक र कुन समयमा गर्ने ? थाहा पाउनुस् !
एमाले विवाद समाधान कार्यदलको बैठक भोलि साढे ११ बजे बस्ने गरी स्थगित